Ny dikan'ny anarana Denis. Ny misterin'i Denis
Inona no tian'i Denis?
Ny olon-dehibe Denis, matetika, dia mpandala ny nentin-drazana, saingy amin'ny tanora dia tia fanandramana izy ireo. Maneso sy manambany loatra izy ireo. Ny fankahalàna, rehefa miezaka manery ny fomba fijerin'ny olona iray izy ireo, dia hiaro ny tombontsoany.
Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nad
Ny niandohan'ny anarana Denis:
Ny anaran'ny Grika tany am-boalohany, dia avy amin'ny anaran'ilay andriamanitra grika mitondra fanasam-be ary mahafinaritra - Dionysus.
Ny toetra sy ny fandikana ny anaran'i Denis:
Lasa matanjaka sy salama tsara i Little Denis. Tena faly sy sariaka izy. Ny hajany dia malaza manerana ny distrika, dia hizara ny vatomamy farany. Manambady hatramin'ny fahazazany, mahafantatra izany, ary mampiasa azy io amin'ny fotoana tena mety. Tena ankizilahy tso-po. Tian'izy ireo hanangona na inona na inona - mari-pamantarana, taratasim-bola, marika. Tia biby Izy, mandeha tsara ny biby fiompiny tsy misy fampahatsiahivana ny ray aman-dreniny. Tena mazoto sy mahay siansa, marina amin'ny zava-drehetra, tia asa mafy. Manana fanombanana ny aretina aretin-tsaina. Ny fahasarotana iainan'ny fiainana dia miadana, noho ny vintany sy ny vintany. Indraindray tiany ny manery ny heviny. Tena mirehareha.
Adult dia adim-pon'i Denis, ary rehefa mialohan'ny fihetseham-po noho ny antony ny fihetseham-po, dia tsy mahavita mifintina izy. Tena tsy tiany ny fanakianana amin'ny adiresiny. Denis dia mijery ny zava-drehetra, tia ny mandeha sy mandeha izy, tiany ny fandraisana azy ho eo anivon'ny orinasa vehivavy. Miezaka ny hanaraka ny fitsipi-pitondran-tena izy, saingy tsy manaiky fetra hentitra. Tena mafana fo ary miaina eo amin'ny voka-dratsin'ny fihetseham-pony. Tiany ireo zavatra mahafinaritra sy mahafinaritra ary ireo fitaovana, tia mandray vahiny mangina, mihidy foana ny varavaran'ny tranony. Manana namana maro, na lahy na vavy. Ny rafi-pandrenesana dia somary tsy mivoatra, ny fahatsapana ny fihenjanana mahatsiravina, noho izany dia miteraka alahelo be loatra, ny sazy ho azy dia tena mifanohitra. Mila fitsaharana tanteraka i Denis sy torimaso lava.
Manana karazana tena mamorona izy - dia mihazakazaka haingana izy, fanta-daza fanta-daza, saina saina, ary feno hevitra sy drafitra samihafa. Ny tanjon'izy ireo sy ny heviny rehetra dia miezaka ny mampihatra tsy miankina, na amin'ny olona mitovy hevitra aminy. Fa, izy dia olona manana fihetseham-po, ary afaka miala amin'ny nofinofiny ary manadino ny orinasa, nanomboka indray mandeha, ary momba ny andraikitry ny mpiara-mitory aminy. Tena asa goavana ho an'ny mpilalao sarimihetsika, tale, mpanoratra, mpikaroka, mpanao gazety, mpanao gazety mpaka sary.
Tena tia vehivavy izy, heveriny fa mpitaingina vehivavy tsara tarehy izy. Noho izany, manana fanambadiana maromaro izy, indraindray ny fanambadiana indraindray dia mianjera tsy noho ny fiovana maro, fa noho ny fitiavan-tenany ihany koa. Denis dia olona malemy fanahy, manohina, manosika toe-javatra maro ao amin'ny fianakaviana.
Zavatra mahaliana momba an'i Denis:
Ao amin'ny tantara sy ny zavakanto dia misy olona marobe antsoina hoe Denis. Ity anarana ity dia hita ao amin'ny kolontsaina pop, amin'ny sary hosodoko, ary ao amin'ny cinema.
Manam-bady izy amin'ny fanambadiana miaraka amin'ireo tompon'ireo anarana toy ny Alexandra, Catherine, Anna, Marina, Claudia, Larissa, Polina, Sofya, Sofia.
Anarana Denis amin'ny fiteny samihafa:
Ny anaran'i Denis amin'ny teny anglisy: Denis, Dennis (Denis, Denis)
Anarana amin'ny teny sinoa: 丹尼斯 (Dannis)
Anarana amin'ny teny japoney: デ ニ ス (Dennis)
Anarana amin'ny teny espaniola: Dennis (Dennis)
Ny anaran'i Denis amin'ny teny alemà: Dennis (Dennis)
Anarana amin'ny teny poloney: Denis (Denis)
Denis amin'ny teny Ukrainiana: Denis
Endriky ny matoanteny amin'ny teny espaniola Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny espaniola Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny espaniola
Denis - anarana : grey
Ny voninkazo Denis : lisy eny amin'ny lohasaha
Ny vato Denis : safira
Stonehenge dia nanambara ny tena isan'ireo planeta ao amin'ny rafi-masoandro!
Inona ny anaran'i Taisia
Inona ny anaran'i Artem?
Iza ny anaran'i Yaroslav?
Asidra salisilika avy amin'ny volony nendasina
Photosession amin'ny fomba grika
Venotonics miaraka amin'ny lalan-drà varikose
Sarah Jessica Parker volo fohy ary nanova ny lokon'ny volony
Loharano ho an'ny trano sy trano fonenana
Ahoana no ahafahana manga?
Autohemotherapy - rafitra fanatanterahana
Sakafo hariva amin'ny zaza iray
Homocysteine ​​rehefa manomana vohoka - inona no holazaina amin'ny fanadihadiana?
Miss Fofo Down Jackets - vokatra malaza sy marevaka amin'ny loko marevaka
Riboxin - famantarana ampiasaina
Fanaporofoana 17 fa ny mpandroba no asa mafy indrindra eto amin'izao tontolo izao
Ny reniranon'i Võhandu